Nwee | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Kedu uru cheese dị?
Kedu uru cheese dị? ezé na-ewusi Njirimara bara uru nke cheese chikosiri ike site na ngwugwu ya. Mmiri protein protein casein, nke dị na curd nwere ezigbo oriri na-edozi ahụ ma nwee ike dochie edozi anụmanụ, 300 g curd ...
kedu ka esi esi zucchini na eggplant maka nri ehihie?
kedu ka esi esi zucchini na eggplant maka nri ehihie? ragout, fry myasko, yabasị na akwụkwọ nri niile ị na-ahụ n'ime ngwa nju oyi, kpuchie na stew ruo mgbe esiri ya.
Ha na-ekwu na ị nwere ike ịwụnye buckwheat na otu buckwheat maka abalị ahụ, ị ​​ga-enwekwa porridge n'ụtụtụ. Ònye mere nke a? Kedu mmiri iji wụsa?
Funchoza na mgbakwasa ya .. Kwado ndenye ọgwụ.
Funchoza na mgbakwasa ya .. Kwado ndenye ọgwụ. Esche mfe: fuchoza, ose ọhụrụ na kukumba ibe, jupụta osisi. mmanụ Salad na fuchozoy Fillet nke otu ọkụkọ ara nke carrots (ụlọ ma ọ bụ zụrụ) 300 ...
esi mee ka nduku pancakes?
-eme ka nduku pancakes? ị masịrị poteto, enwere akwa na obere ntụ ọka, nnu, ngwa nri ... ighe ke butter dika cutlets breaded ... Ka Ntụziaka di n’elu. Ọ bụrụ n’agbata abụọ…
kedu ka esi esi nri maka nri abalị? isi na-abịa ugbu a!
kedu ka esi esi nri maka nri abalị? isi na-abịa ugbu a! M wee bepụ ụkwụ ahụ site na ọkpụkpụ, belata fillet ahụ na akpụkpọ ahụ n'ime obere iberibe, na-amanye n'ime akụkụ 2-4, na ...
kpebisiri ike ime Mayonezi. ọ gbanwere mmiri mmiri. N'ihi gịnị?
kpebisiri ike ime Mayonezi. ọ gbanwere mmiri mmiri. N'ihi gịnị? ihe niile kwesịrị ịbụ otu okpomọkụ ahụ na ebe nchekwa dị na ụzụ na-agbajikwa ma ọ bụ na ihe nchịkọta dị njọ. M na-eme nke a uzommeputa ebe Soviet ugboro, mgbe Mayonezi bụ ...
inye aka pancakes ole mmiri ara, ntụ ọka, àkwá, nnu, soda, bọta?
inye aka pancakes ole mmiri ara, ntụ ọka, àkwá, nnu, soda, bọta? Ana m eme ihe niile site n'ile anya. Were otu àkwá n'otu oge. wee leba anya n'usoro ochichi ahụ. Soda etinyeghị n'ụsọ oké osimiri ...
Enwere ntụ ọka, mmiri, sugar na BUCK ịchụ nta ....
Enwere ntụ, mmiri, shuga, na EAT na-achụ nta .... Achịcha anaghị arụ ọrụ, ị nwere ike ịme achicha, ụfọdụ tortillas, ghaa ụfọdụ, naanị yist ka achọrọ. Na mmiri, achịcha ga-arapara, mma karịa. Igwakorita na mgwakota agwa ka ...
Kedu esi esi esi nri cricbs na-atọ ụtọ? N'ụlọ ma na mmanya mmanya. Achọrọ m nke ukwuu.
Kedu esi esi esi nri cricbs na-atọ ụtọ? N'ụlọ ma na mmanya mmanya. Achọrọ m nke ukwuu. Achịcha na garlic: 1 / 4 achịcha nke rye achịcha, 2 st. spoons nke ihe oriri na mmanụ, 1-2 Mpekere ...
Olee ngwa ngwa ma na-atọ ụtọ ịkwadebe barley barley?
Olee ngwa ngwa ma na-atọ ụtọ ịkwadebe barley barley? nke a na - eme ka ọ bụrụ na ị na - vkysno i bistro Perlovka abụghị nri nke a kwadebere ngwa ngwa. Ngwa ngwa ...
kedu ka esi esi mee ka a na-egbu azụ? = na ngwa ngwa ...
Esi esi ofe catfish? = kpoo nkata ... anyị na-ewere azụ̀ ahụ n'ime ụtarị, wee banye pan na n'ime ite. Ọ dị mma na ite karịa n’ime ngwa ngwa. Bee n'ime akụkụ, ime biya ...
Kedu ihe bụ Lieszone na esi edo ya?
lezone ihe na otú e si esi ya? Na e unassumingly bụ ihe omelet na mgbakwunye na nke uda di iche iche na àkwá, M anya, larịị efere)))))))))) lezone All ofe gbazie na-akpọ lezone. Lezone na-kwadebere dị ka ndị a: ...
gwa m nri nri si anụ ezi
gwa m nri erimeri anụ ezi eghe, anụ ezi eghe, maka m, anụ ezi na nri nwere nkwekọ na nri ezi anụ ezi anaghị abaghị uru.
Ogologo oge ole ka ị ga-eji esi nri 300gr. Hake fillet?
Ogologo oge ole ka ị ga-eji esi nri 300gr. Hake fillet? Brew fish in chailers fish, stewpots and in deep stove trays. N'oge nri, a ghaghị imikarị azụ ahụ n'ime mmiri; na nkezi ...
Esi esi esi nri oatmeal, mana egbula ya?
Esi esi esi nri oatmeal, mana egbula ya? Ana m azụta Hercules na enweghị nsogbu na nri! wụsara esi mmiri mgbe ya ezé brushed porridge ama nastyalas. ntakịrị nnu na butter. Ị nwere ike ime nke a, ...
esi mee pancakes ma ọ bụ pancakes na-enweghị kefir na yist ???
esi mee pancakes ma ọ bụ pancakes na-enweghị kefir na yist ??? Fritters na mmiri ara ehi na-enweghị yist Efrata ndepụta nke mmiri ara ehi 500 ml àkwá 2 pcs sugar 2 st. Ngwakọta teaspoon 1 / 2 ch. spoons ...
esi esi nri mmiri ara ehi noodles?
Esi esi nri mmiri ara ehi noodles? NKWUP NETA NKE ANỌ: mmiri ara ehi - 0,5 lita vermicelli - 75 grams butter - 30 grams shuga - 1 tbsp. nnu (tablespoon nnu) - ngaji tii 1/2 ..
Ihe kacha mma lasagna uzommeputa bụ na-atọ ụtọ n'ezie?
Ihe kacha mma lasagna uzommeputa bụ na-atọ ụtọ n'ezie? M na-akwadebe maka nke a uzommeputa, nnọọ ụtọ tụgharịa https://usoda.ru/blog/retsept-lazaniИ ngwaahịa, site ụzọ, na otu saịtị nyere iwu Akwukwo nri lasagna na cheese 250 g soft ewu ...
mfe pizza mgwakota agwa uzommeputa
kacha Ntụziaka maka Pizza mgwakota Efrata: Na 2 30 cm x Pizza bases: 2 tsp nkụ drozhzhey1 tsp sahara350 g ọcha muki3 tbsp olive maslasol podelic ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,653.